I-WHITE MARBLE KITCHEN IDEAS (UYILO OLUHLE) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-White Marble Kitchen Ideas (Uyilo oluhle)
I-White Marble Kitchen Ideas (Uyilo oluhle)
Wamkelekile kwigalari yethu yemibono emhlophe yemarble ekhitshini kubandakanya iintlobo ezithandwayo, i-backsplash, i-flooring kunye ne-countertop yoyilo.
I-marble emhlophe isetyenziswe ekhitshini ixesha elide. Sele isinde kumaxesha amaninzi oyilo kwaye iqinisekisile ubuhle bayo bokungaphelelwa lixesha kunye nokulungelelaniswa. Akumangalisi ukuba i-marble izise isibheno esiqhelekileyo nakweyiphi na ikhitshi, iyenze ukuba izive intofontofo ngakumbi. I-Marble idla ngokusetyenziswa kwi-countertops yekhitshi, kwaye ifunyenwe kwi-backsplash ngendlela ye-slabs eqinile kunye neetile zeemarble.
IMarble lilitye elihle lendalo elinokuba nefuthe elikhulu naphi na ekhitshini, ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. I-Marble inokucocwa kwiithayile, ii-mosaic kunye nanjengoko zilula kodwa zilungile zijonga imiphezulu yeetafile.
Imabhile emhlophe ngokukodwa inokudityaniswa kunye nezinye izinto ezininzi ekhitshini ukongeza ubungakanani obongezelelweyo kwisithuba. Ezinye izimvo ezintsha zinokudibanisa i-marble ngomthi okanye ikhonkrithi. Ngokufumana isiqwenga semabhile ekhitshini, umzekelo, isiqithi, sinokuyityhalela ekubeni ibe yindawo ekujongwa kuyo ekhitshini, okanye nakwikhaya ngokupheleleyo. Ngelixa usebenzisa i-marble kuzo zonke ii-countertops, kunye nakwezinye iindawo ekhitshini ziya kudala indawo ephezulu, efanelekileyo.
Imiphezulu yeetafile ezimhlophe ezimenyezelelweyo kunye ne-backsplash zinokudityaniswa nekhabhathi emnyama emnyama yokwenza umhlophe ubonakale ngokuchasene nomnyama. Ukuba i-marble ephosiweyo kunye nokushiya ikhabhathi yomthi omnyama kwisiphelo se-matte kuyakuvumela umahluko ukuzisa i-ounce nganye yokugxila kwimarble ngemvakalelo yanamhlanje kwindawo yonke.
Iikhabhathi zekhitshi emhlophe emhlophe (Iintlobo ezidumileyo)
Ngaba imarble kukhetho olufanelekileyo kwiitafile zekhitshi?
Iindleko zeMarble Countertops
Isiqithi seMarble Top Kitchen
I-Marble ephathekayo kwiSiqithi seKhikhi
Ikhitshi leMarble Backsplash
Unakekela njani i-marble backsplash?
Uyilo loMgangatho weMarble ekhishini
Zininzi iintlobo zeemabhile ezimhlophe, kwaye zonke zinempawu ezahlukeneyo zempahla. Kuxhomekeka kwindawo okuyo, iintlobo zeemabhile ezikhoyo apha ekhaya, ubungakanani beslabi kunye nobukhulu, amaxabiso aya kwahluka. Eyona marble yaziwa ngokuxhaphakileyo neqhelekileyo isetyenziswa zezi zilandelayo:
UCarrara Marble Olona hlobo luthandwayo, le marble yaziwa ngombala wayo ongwevu ongwevu ngenxa yokuthamba, ukuthamba okuchasene nemvelaphi emhlophe. Ukusukela umbala kunye neepateni kwaye zithambe kakhulu kwaye zinobuqili, kulula ukudibanisa nayo nayiphi na ikhabhathi ekhoyo.
ICarlcatta Marble - le marble yase-Italiya ngumlingani obiza kakhulu kwiCarrara Marble. Olu hlobo oluthile luyaziwa ngetoni yalo efudumeleyo kunye nemithambo yayo eyahlukileyo ngokobukhulu kunye nobukhulu. Xa kuthelekiswa nethoni engwevu iyonke yeCarrara, imithambo yemarble yeCalcatta iza nge-beige, igolide kunye nengwevu.
Imarble esemthethweni - enye imarble yaseNtaliyane exabiseke kakhulu, olu hlobo luyathandwa ngokukodwa ekusebenziseni imifanekiso eqingqiweyo yemabhile. Unombala oqaqambileyo ocacileyo, odityaniswe nomdaka ongwevu ofana neCalcatta.
I-Thassos Marble -Le marble ivela eGrisi, kwaye yaziwa ngokubonakala kwayo ngokuqaqambileyo kunye nokuqaqamba. Sele isetyenziswa ukususela kumaxesha amandulo, kwaye ibonakele isetyenziswa ekhitshini nakumagumbi okuhlambela ukuyinika imeko eqaqambileyo. Ngokungafaniyo neemabhule zangaphambili ezaziwa ngemithambo eyahlukileyo, olu hlobo lunombala omncinci kakhulu kwaye luxabiseke kakhulu ngombala ococekileyo nococekileyo.
IMarble eMhlophe yeHimalaya - enye imabhile yesiGrike, olu hlobo luneempawu ezifanayo neCarrara, kodwa inemithambo eyahluka ngombala, ibaleka ingwevu, mdaka ukuya kwimibala emfusa ebekwe kwimvelaphi ecocekileyo, emhlophe.
Imfihlelo emhlophe yeMarble -Ukuba ufuna ukubonakala okungacacanga kwaye ungakuthandi ukungafani okucacileyo kolunye uhlobo lweemabhile, imfihlelo emhlophe yemarble inokuba ngumdlalo ongcono, njengoko inemithambo enombala wekhrimu kuyo yonke, ngokuchaseneyo nezimvi.
Kuxhomekeka kwiimfuno zakho kunye nendlela osebenzisa ngayo ikhitshi, ukusebenzisa imiphezulu yeetafile zemabhile kunokuba yinto enkulu yotyalo-mali. IMarble yaziwa ngobuhle bayo obungapheliyo ngoko ke ngekhe kufuneke ukuba uzikhathaze ngokuphuma kwisitayile, kwaye ikwanceda ukunyusa ixabiso lepropathi yakho, njengoko imarble iyinto ebiza kakhulu.
Iminqweno emihle kumyeni nomyeni
Kwicala leflip, imarble ayibizi kuphela, kodwa ikwafuna ulondolozo njengoko inezinto ezinobushushu. Inzima kakhulu, kwaye ithambekele kumabala, ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyayisebenzisa kwimiphezulu apho ungalindelanga ukubeka izithako ezinokuthi zingcolise loo countertop.
Ukuba ibekwe kwiindawo ezihamba abantu abaphantsi, imarble inokuba zizinto ezihlala ixesha elide, kodwa uqaphele ukuba imarble ithambile xa ithelekiswa namanye amatye, kwaye ithambekele ekukhatheni nasezintanda, ke ulondolozo olufanelekileyo kunye nokhathalelo luyimfuneko.
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ukuba uzikhumbule xa ukhetha i-countertops ye-marble kukuba i-porous! Oku kuthetha ukuba banokuvumela ioyile kunye namabala kwilitye ngokwalo. Imarble ikwathambile kunezo zombini i-quartz kunye negranite, okuthetha ukuba kunokuba kukrwele ngakumbi kunye neetshiphusi.
Oku kunokuba yingozi xa umntu enabantu emakhayeni abo (umzekelo: abantwana) abanokuthi bangazihloniphi iitafile njengoko kufanelekile. Kwezinye iimeko ukusebenzisa i-quartz countertop kunokuba yinto ekhethekileyo ngokusekelwe kwimeko. Ukuba oku kuyinkxalabo nangona gcina engqondweni ukuba kukho amatywina kunye neepolishi ezinokunceda ukukhusela kobu buthathaka.
Ukuba nabantwana akufuneki kuthintele nabani na ekubeni nekhitshi lamaphupha abo! Ngokukodwa kuba naxa ikhawuntara yemabhile ifumana ukukrwela okuncinci, awanakuphawuleka ngaphandle kokuba ukukhanya kunye neeengile zilungile, kulungile kule meko akulunganga! Yonke into imalunga nokukhathalela i-marble kunye nothando ngendlela eya kuba yinxalenye yekhitshi.
Ngelixa uyilo kunye neetafile zemabhile ungafuna ukuyiphatha kwindawo yonke esiqithini. Isiqithi sasekhitshini sikulungele ukonwabisa okanye nokuchitha nje ixesha elongezelelweyo ngelixa upheka nosapho. Isiqithi yindawo yokubala ehlukaniswe macala onke, rhoqo ikhawuntari enye iphuma ngaphezulu kwesiseko sekhawuntari. Oku kuvumela ukuba izitulo zibekwe ngaphantsi ukukhuthaza ukuqokelelana ekhitshini.
Nje ukuba abantu baqale ukuqokelela ekhitshini umninikhaya akanokubonisa kuphela izakhono zabo zokupheka kodwa kunye nesiqithi esizukileyo semarble, esiya kuthi siqiniseke ukuba sifumana izincomo ezininzi. Oko kuthethiweyo, iziqithi ziza ngazo zonke iimilo, ubukhulu kunye nokusetyenziswa. Ezinye iziqithi zibandakanya imibhobho yamanzi kunye / okanye umbane, onokuvumela isinki, iiplagi, kunye nesitofu. Ukuba oko kuphuma kuhlahlo-lwabiwo mali nangona ukunamathela kwiikhabhathi ezisisiseko iseyinto elungileyo, okanye nokuba sisiqithi setafile.
Uyilo lwale khitshi alula, kodwa ngenxa yokuba iStatuario marble yayisetyenziswa kuwo onke ama-countertops kunye ne-backsplash, iyakwazi ukufezekisa isibheno esihle kunye nesityebileyo. Isiqithi esikhulu sekhitshi sibalaselisa ubuhle beli ziko linobunewunewu.
Amatye endalo ngesiqhelo aya kubiza ngaphezu kwelitye elenziwe ngabantu. Kuyathethwa ukuba kukho iindleko ezininzi zokonga ngokufanelekileyo ngelixa ufumana ubunewunewu bemabhile. Imibala eyahlukeneyo inokunyusa okanye inciphise amaxabiso, kunye nendawo, ubukhulu, kunye noyilo lwamaqhekeza.
Ngokuqinisekileyo Amaxabiso esethi yemarble Zijikeleze i- $ 125- $ 250 ngonyawo wesikwere kubandakanya ukufakwa. Oku kukubeka kwintengiso entle yokukhuphisana namanye amatye akhoyo kodwa ngentla ngenxa yokuhlawula ilitye leprimiyamu.
Isiqithi sekhitshi sihlala siyindawo ekugxilwe kuyo ekhitshini, ikakhulu ngenxa yokubekwa kwayo, ke kuyindalo ukubona imiphezulu yeetafile zemabhile zibekwa kwiziqithi zasekhitshini ukubonisa ubuhle bayo. Indawo enkulu yeziqithi zasekhitshini ikwavumela ukuba usebenzise ii-slabs ezinkulu ezibonisa iipateni ezizodwa zemarble.
Iindidi ezininzi zeziqithi ziyafumaneka nazo, isiseko sekhabhathi yesiqithi, isiqithi setafile, isiqithi esisebenza ngokupheleleyo, isiqithi esinengxangxasi, isiqithi esiphindwe kabini, ngokuqinisekileyo amathuba anokuphela. Ngalunye lwezi zikhetho luza nendlela yalo yokuyila kunye nokongeza amanqaku emarble.
Iimvumba ezithambileyo zeCalcatta marble zihambelana kakuhle nepeyinti engwevu yentsimbi yale khitshi. Imabhile emhlophe eqaqambileyo kunye nee-vement zayo ezingwevu ezithambileyo ziyawugcwalisa umbala omnyama weekhabhathi kakuhle.
Eli khitshi lisebenzisa uhlobo lweemabula ezingathandwa kangako, elilelilitye lemarble. Le marble inemithambo entle engathi ngwevu / ye-beige, enezinto ezinoburhabaxa kunye namagophe afana neenkuni. Oku kunika imbonakalo ethambileyo nefudumeleyo lukhetho olukhulu ukuba ukhetha ukubukeka okuthambileyo.
Le slab intle yeCalcatta marble ibonakala isetyenziswa kwiziqithi zasekhitshini, eyona ndawo iphambili yokuphamba kunye ne-backsplash. Ngenxa yesikim semibala engwevu yekhitshi, umbala omhlophe oqaqambileyo wemabhile uyakwazi ukunika indawo ukukhanya okukhaphukhaphu kunye nokuchwayita okungakumbi.
Imabula yeCalcatta esetyenziswe kule khitshi yanamhlanje ineempawu ezithile ezinemigca yegolide kuyo, inika isibheno esahlukileyo kodwa esihle. Imvelaphi emhlophe emhlophe yemarble inceda umahluko kunye nokukhanyisa ikhitshi leenkuni zonke, kunye nokulinganisa konke ukubonakala.
I-countertop yesiqithi se-waterfall ingazisa i-marble ngeenxa zonke ukusuka phezulu ukuya ngasezantsi njengesiqendu esichukumisayo. Ukuba kwiprojekthi yokonga iindleko oku kunokuba yinto elungileyo yokuphepha ukongeza iikhabhathi kunye nemibhobho efunwa zezinye iziqithi.
Yintoni ebeka le nto yokuyilwa kwamaphuphu emarmore ekumgangatho ophakathi kukuba isebenzisa ipateni yemabhile ehambelana nencwadi endaweni yesalab epheleleyo enepateni engahleliwe. Oku kuvumela iipateni eziphindaphindayo eziphindaphindayo phezulu kunye namacala e-countertop. Ukugquma okumnyama okumnyama kwimarble kubonakala ngokuchasene nemvelaphi emhlophe eqaqambileyo, eyenza indawo yonke yebar ibonakale kuyo yonke ikhitshi elimhlophe.
Imabula yeCalcatta esetyenziswe kwesi siqithi sikhulu sekhitshi ikakhulu inemithambo engqindilili, emnyama engwevu esasazeke ngokubanzi ngapha nangapha komhlaba, isenza ipatheni ekhethekileyo necocekileyo egqibeleleyo kwimbonakalo yanamhlanje yale khitshi.
Ikhitshi eliphefumlelweyo lelizwe lisebenzisa iCarrara marble kuzo zombini iitafile eziphambili kunye nesiqithi sayo esikhulu sasekhitshini. Iipateni zemithambo efihlakeleyo yemarble zincedisa ukubonakala okucocekileyo nokuthambileyo kwekhitshi kwaye zigqiba isikimu esimhlophe sombala wendawo.
Kule khitshi ingwevu yeli xesha, kwasetyenziswa ilitye elingqingqwa leemabhile zeCalcatta kuzo zombini iitafile eziphambili kunye nekhawuntara enkulu yesiqithi sekhitshi. Iipateni zemithambo yegrey engwevu kwimabhile ngokuqinisekileyo ngumdlalo ofanelekileyo wesikimu sombala wale ndawo.
indlela yokwazi idayimane yokwenyani
Isilaydi esityebileyo seCarrara esisetyenziswe kwesi siqithi sikhulu sekhitshi sinobukeka obuthambileyo kunye nokuphupha kuso, ukuxhasa umbala oluhlaza othambileyo wekhabhathi zasekhitshini. Umzekelo othambileyo weemarike zemarble kunye neetayile zemarble backsplash zahluke kakuhle kumgangatho owomeleleyo womthi wewalnut.
Ukuba ukubuyisela i-countertop yakho ekhoyo kuya kuba yindleko kakhulu, enye indlela yokongeza i-marble kwindawo yakho kukusebenzisa izixhobo zokubala zasekhitshini. Ezi zincinci, ii-countertops ezizimeleyo onokuzihamba ngokulula ekhitshini. Zifumaneka ngokwesiko kwaye zilungiselelwe, ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo ukutshatisa ikhitshi esele likho.
Imarble ephathekayo kwisiqithi sasekhitshini- Jonga e IAmazon
Le countertop ilula ephathekayo incinci kwaye ikhanya ngenxa yesiseko sayo somlenze ovulekileyo wentsimbi. Oku kukuvumela ukuba uyihambise ngokulula kwindawo. Ngenxa yesayizi yayo encinci, ungayongeza ngoku ngoku nakwiikhitshi ezincinci.
Ukubuyela umva kungongeza iziqholo ekhitshini, kulapho umyili anokuhla khona aye kwishishini. Ukubuyela umva kutsaleleke ngqo (uyiqikelele) ngasemva kwee-countertops ukunqanda nayiphi na (uyiqikelele kwakhona) ukutshiza okunokwenzeka. Ukutyhalwa emqolo kuthetha ukuba abayili kufuneka benze ubuchule ukuze i-backsplash ingapheli kwaye ifihle phantsi kweekhabhathi.
Iimpawu zemarble zemarble zinokongeza nje loo pop wongezelelweyo wenza ukuba iindwendwe zibone ukubuyela umva phakathi kwabo bonke obunye ubuhle ekhitshini. Ngelixa i-mosaic backsplashes lukhetho oludumileyo kukho ezinye iindlela ezinokuthi zisebenze ngcono ekhaya.
I-slab backsplashes ikwakhona ukubopha kunye neetafile kunye neetayile zemabhile onokuzisebenzisa ukwenza iipateni ezinqwenelekayo, mhlawumbi nomzobo wesiko! Yilapho ubuchule bunokuqhuba khona kwaye imibala inokuba nesibindi kwaye yahluke kuba i-backsplash ayikho ngqo ebusweni babantu kwaye ivumela indawo encinci ukuba ibe nelizwi kunye ne-eccentric.
Isicelo esithandwayo semarble emhlophe ekhitshini yi-backsplash kuba ifuna ulondolozo lwemihla ngemihla. Xa kuthelekiswa nemiphezulu yeetafile, ukusebenzisa i-marble kwi-backsplash akunakuyibeka phantsi kokunxiba kunye nokukrazula kwintanda, ukufuma kunye namabala, kwaye ngokuqinisekileyo kuya kuhlala ixesha elide. Ihlala ityhileka kwioyile nakumswakama xa ibekwe kufutshane nendawo yokupheka kunye nesinki, kodwa ubungakanani bomswakama obuchazwe kuyo bungaphantsi kunokububeka phezu kweetafile.
Le khitshi emhlophe yeli xesha lisebenzisa isaliti enkulu egcweleyo yemabhile yaseCalcatta kwi-backsplash yayo, isenza indawo enkulu engenamthungo yokubuyela umva ehambelana ncam nezinto zetafile ezisetyenzisiweyo. Ukukhazimla okumenyezelayo kwemarble kunye neepateni zemithambo yegrey engwevu yongeza ipateni ngakumbi kunye nokubengezela okucwebezelayo kwimibala ikakhulu yematte esetyenziswe kwisithuba.
Nangona iphantsi kokunxiba kunye nokukrazula okuncinci, i-marble backsplash ifuna ukhathalelo olufanayo kunye nolondolozo njengamabala emarble. Kuya kufunwa ngokufuthi kunakwi-countertops, nangona kunjalo, kodwa iindlela kunye nobuchule zihlala zifana. Nazi izinto ezisisiseko zokhathalelo lweemabula:
Ukutywina - ekubeni i-marble yinto enobungozi, ukutywinwa kubalulekile ukwenzela ukuba umswakama ungangeni ngaphakathi kwento kwaye kubangele ukuba ibhaktheriya yakhiwe, kunye nokuqhekeka. Sebenzisa iarhente yokutywina efanelekileyo kwizinto zakho njengoko kucetyisiwe. Ukuba amanzi awaphindi abe phezu komphezulu wemarmore yakho kwakhona, luphawu ekufuneka ulwenzile kwakhona.
Icocekile- ibhastile linokonakaliswa ziiasidi ezicocekileyo nezicocekileyo, ngoko ke kungcono ukusebenzisa izixhobo zokucoca, okanye usebenzise nje isiponji esifumileyo okanye iraki rhoqo ukuyigcina icocekile.
Amabala - susa amabala ngokusebenzisa i-poultice paste kwindawo okanye amabala anebala. Yigqume kwaye uyiyeke kangangeeyure eziyi-12 ukuya kwezi-24, susa uncamathele ngelaphu elifumileyo, uphinde ufake isicelo xa kufuneka kushiyeke ibala.
Thintela amabala - imabhile yinto ebiza kakhulu, ke zama ukuyigcina kude kwizitrasi kunye neeasidi njengoko izakutsho izinto, kunye namabala anje ngeewayini, njl.njl. Ukuba ufuna ukusebenza ngezi zithako kufutshane nomphezulu wemabhile yakho, ungabeka iplastiki okanye i-silicone mat, okanye usebenzise ibhodi yokusika ukuze ingadibani ngqo nomphezulu wemabhile.
Funda ngakumbi malunga indlela yokucoca imiphezulu yeetafile zemabhile Apha.
Kule khitshi, endaweni yelitye elipheleleyo lemabhile, kusetyenziswa iithayile zendlela emarmore endaweni yoko. Isebenzisa i-marble yeArabic eyaziwayo ngeepateni zayo zemithambo eluhlaza okwesibhakabhaka, inika indawo yokubuyela umva ukubamba okupholileyo ukwahluka kwezinye iindawo ezimhlophe. Ngenxa yokuba iithayile zemabula zangaphantsi zincinci, ayizukuthambeka ngokulula kwiintanda. Nangona kunjalo, ubukho begrout kuya kuyenza ichaphazeleke ekubumbeni kunye nasekwakhiweni kokungcola, ke kufuneka ukhathalelo olufanelekileyo kunye nolondolozo.
Leli khitshi elimhlophe lisebenzisa i-marble emhlophe emhlophe kwi-countertop kunye ne-backsplash. Le marble yaseBrazil yaziwa ngemvelaphi yayo emhlophe kunye nemithambo yamalahle amnyama ngeepateni ezimangalisayo, ezinje ngomsi / i-watercolor enika nasiphi na isithuba inkangeleko enesibindi neyodwa.
Izithembiso zesithembiso segolide yakhe
Mhlawumbi imiphezulu yeetafile ayilifanelanga ngokufanelekileyo ikhaya elisesandleni, mhlawumbi eli khaya lifanelekile Umgangatho wemabhile . Oku kuyakuzisa isixa esikhulu seklasi kunye nodumo kwigumbi ngemizuzwana. Apha ukhetho alunamkhawulo.
Imigangatho emhlophe epheleleyo inokuzisa imvakalelo yanamhlanje kwaye xa ipholishiwe iya kukhanyisa igumbi. Olunye ukhetho lunokuza nephethini isebenzisa imibala eyahlukeneyo kunye neemilo zethayile emarmore, ngelixa oku kuqhekeza umhlophe omsulwa, iipateni zinokubamba amehlo kakhulu.
Kwaye ukuba usebenzisa iikhabhathi ezimnyama okanye izixhobo zombane ngokudibanisa nemabhile emhlophe, ukongeza ezinye iithayile ezimnyama zemarble zinokubopha igumbi kunye. Ezinye iimarble ezimhlophe zinqunyiwe ngemithambo emnyama kwiithayile ezinokuba yinto efanelekileyo xa ufaka i-marble flooring.
Ngaba imarble ilungile kumgangatho wasekhitshini? Ngaphandle kwetafile kunye nokusetyenziswa kwe-backsplash, i-marble isetyenziswe kumgangatho wekhitshi. Kuya kufuneka uqaphele ukuba ukutyibilika kwemabula kuneepropathi ezifanayo njengemabala emarmer emarble. Bahlala behlukile-isiqwenga ngasinye sahlukile, kwaye sihlala sinomtsalane. Ngenxa yokuba imarble iyabiza, imarble yongeza ixabiso kwipropathi yakho ukuba uyigcina kakuhle.
Ngaba imigangatho yemarble yomelele? Kuya kufuneka ugcine ukhumbula ukuba imigangatho yemarble iyangena kwaye ifuna ukugcinwa kwakhona kunye nokugcinwa kwayo, kwaye ikwathambekele ekuqhekekeni nakumabala. Ukuba ukulungele ukuchitha ixesha kunye nemali ngokugcina imigangatho emarmore emhlophe, uya kuba nakho ukonwabela ubuhle bayo obungaphelelwa lixesha kumgangatho wakho wasekhitshini. Ukuba awuzimisele ukugcina ulondolozo lweemabhile, nangona kunjalo, kungcono ukusebenzisa i-marble kwiindawo ezingenanto yokugqoka kunye nokukrazula, njenge-backsplash yekhitshi okanye izixhobo zokubala ekhitshini.
Ngenye indlela, ukuba ufuna ukubonakala kweethayile zemabhile ekhitshini lakho, unokukhetha ukusebenzisa iithayile ze-porcelain endaweni yoko. Zininzi iithayile ze-porcelain ezikumgangatho ophezulu ezinembonakalo yemarble / iipateni ezikhoyo kwintengiso. Ayisiyomfuneko nje kuphela ukuba yomelele, ikwindawo encinci, kulula ukuyigcina, kwaye ifikeleleka ngakumbi.
Ipateni ye-vein ethambileyo yemabula ye-Carrara ihambelana kakuhle noyilo lwekhitshi. Ngenxa yokuba ipateni yemithambo yeCarrara ithambe kakhulu kwaye inobuqili, umbala kunye nepateni ayiphazamisi ubucwebe obucocekileyo kunye nobuncinci bendawo.
Kule khitshi yesitayile yakudala, kuba ikhabhathi isebenzisa indibaniselwano yeekhabhathi ezimhlophe nezimhlophe ezipholileyo, kunye neetafile ezimhlophe zemabhile, imigangatho isebenzisa iithayile zemabhile ze-beige ukunika indawo ithoni efudumeleyo efihlakeleyo, ukudala ukujonga okuthe kratya.
Ikhitshi yesiFrentshi yasekhitshini, esi sithuba sisebenzisa ikhabethe egqityiweyo emhlophe, idityaniswe netafile emhlophe yetyuwa kunye nepepile. Imigangatho isebenzisa imarmore emhlophe efihliweyo enemithambo ye-beige ekhanyayo ukunika indawo ithoni ethambileyo, efudumeleyo.
yakhe kunye neyakhe titanium imitya yomtshato
Isiqithi senqanawa yasekhitshini
amakhonkco wesithembiso segolide kuye
ndiyifumana phi indoda yam yekrismesi